प्रचण्डले भनेकै भयो, देशभरका माओवादीहरु बने उत्साहित ! – GALAXY
प्रचण्डले भनेकै भयो, देशभरका माओवादीहरु बने उत्साहित !
काठमाडौं । केही विश्लेषकहरुले नेपालको राजनीति विगत केही दशकदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै वरिपरि घुम्दै आएको छ । यसैबीच, प्रचण्डले केही नयाँ गर्न लागेको संकेत देखिएको छ ।
प्रचण्डकै इच्छाअनुसार हुने संकेत देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा दुई पार्टीबीच सहकार्यका विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
माओवादी केन्द्र र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच केही दिनयता पार्टी एकताको प्रयासअनुसार छलफल चल्दै आएको छ । यसको पहल माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले गर्दै आएका छन् । शनिबार बिहान पनि महराले नै विप्लवलाई प्रचण्डको निवास खुमलटार लगेर गएका थिए ।
प्रचण्डले पटकपटक विप्लव, वैद्य, बाबुराम लगायतका पूर्वमाओवादीहरुलाई एक हुन आह्वान गर्दै आएका थिए । विप्लव लगायतले पनि एकताका लागि तयार रहेको भन्दै ग्रिन सिग्नल दिएपछि प्रचण्डले भनेजस्तै हुने संकेत देखिएको हो । पूर्वमाओवादीहरु मिल्ने संकेत देखिएपछि देशभरका माओवादी नेताकार्यकर्ताहरु उत्साहित बनेका हुन् ।
‘छलफलमा प्रचण्ड, विप्लव र महरा कमरेड मात्र बस्नु भएको थियो, दुई पार्टीबीच सहकार्य गरेर जान सकिने विषयमा सकारात्मक छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतले भन्यो, ‘तत्काल सहकार्य गर्ने र पार्टी एकता गर्न छलफल चलाउँदै जाने समझदारी उहाँहरूबीच भएको छ ।’ तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजन हुँदा मोहन वैद्य ‘किरण’सँगै विप्लव पनि अलग भएका थिए । पछि उनी वैद्यबाट पनि अलग भए । उनले २०७१ साल मंसिर १३ गते चितवनमा अलग्गै भेला गरी आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर भूमिगतरुपमा बम विष्फोट, व्यक्ति हत्या लगायतका गतिविधि गरेपछि तत्कालीन सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । पछि सरकारसँग २०७७ फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमति गरेर विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका थिए ।